Elona Phepha linokuphinda linokuphinda lisetyenzwe njengomenzi woMkhuseli weScreen kunye neFektri | Keja
uyilo olunokutsalwa kulula ukufaka kunye nokuchonga; isebenza kakuhle nesikhuselo seglasi,anti-zeminwe kunye manzi; iyahlambeka,cIyahambelana ne Zonke iimodeli ze-iPad kunye nezinye iipilisi zohlobo,I-nano technology yokuncamathelisa izinto, ezinokuphinda zisebenze kwaye ziphinde zihlambeke,Ifilimu yePET Matte ,ukuzisa ipensile egudileyo ngaphandle kokutyibilika nokwaphuka; Njengokuzoba ephepheni,Ukuhanjiswa kokukhanya kufikelela ngaphezulu kwe-90%; xa kuthelekiswa neemveliso zangaphambili, inkungu yehle nge-45%, kwaye ukuthembeka kombala kunyuke nge-25%; Ukufundeka nangaphantsi kwelanga elomeleleyo, ukunciphisa uxinzelelo lwamehlo akho. Ukuphendula ngokukhawuleza nangokuchanekileyo kwi-ID yobuso ngokunjalo,kulula ukuyigcina kwaye kulula ukuyiphatha.
1.Detachable & Removable.Ungayifaka xa ufuna ukwenza iphepha kwiphepha le-iPad, ulisuse ulibeke kwifolda yokugcina xa ukwezolonwabo.
Itekhnoloji ye-2 yeNano enokuphinda isebenze, inakho ukuphinda isebenzise ngaphezulu kwamaxesha angama-20,000.anti-zeminwe kunye manzi; iyahlambeka
3.Amacala omabini athengiswe nge-TPU side glue. Easy ukufakwa, akukho amaqamza.
Sebenzisa ungqimba ubukhulu 0.24m.
Ukudluliselwa kwama-90%, inkungu 26%
I-6 Sensitive Smooth Gliding.Le Reusable njengePhepha lesikhuseli lesikhuseli likunika imvakalelo yendalo kunye neyokwenene ngokubhala okubhaliweyo kwiscreen njengokubhala ephepheni, kugudile kwaye kuyaphendula.
7.Ihambelana nawo onke amacwecwe kunye neepeni ezisebenzayo zeStylus.
Ifolda yokuGcina i-8 ibandakanyiwe: Thatha isikhuseli xa usiswele kwaye usibeke kwifolda ukuze sigcinwe sikhuselekile; kulula ukuyigcina kwaye kulula ukuyiphatha
Ukubhala izinto ezisisiseko sefilimu
Ubungakanani beMatte PET
ubunzima ipensile 500g
ukuhla kwamanzi ikona
Iipesenti ezingama-90 isidanga
Uvavanyo lwepenisi ye-Abrasion
ISITYILI IPEN 500g * 5000 yexesha
Hayi isiqwenga sesanti
Uvavanyo lokumelana ne-Abrasion
Egqithileyo Ukwaziswa kweTitanium 720 ° Guard
Okulandelayo: Uthuli ubungqina bokuba nguMkhuseli weScreen se-iPhone13
I-1.2.5D yeelensi / umkhuseli wekhamera
2 1 iglasi wobulali + iphepha PET ngathi screen pro ...
I-iPhone 13 2.5D iflethi ecacileyo yesikrini ...
I-iPhone 13 PET + yeGlass Edge yoBungqina boBungqina beScreen Pr ...